Ihe kpatara eji eme egwuregwu PVC ga-eji nwayọ nwayọ dochie osisi egwuregwu siri ike-News-Topflor China amachi
Ihe kpatara eji eme egwuregwu PVC ga-eji nwayọ nwayọ dochie osisi egwuregwu siri ike
Echiche:10 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-06-01 Mmalite: Saịtị
Ojiji nke ụlọ PVC iji kpuchie ebe egwuregwu na-egosi na-abawanye ụba, ọkachasị ebe asọmpi ndị ọkachamara, mahadum, ebe egwuregwu elementrị na nke etiti, na ebe ọzụzụ. Yabụ kedu ihe kpatara eji eji egwu egwuregwu eji eji nwayọ eji edo edo eji eji osisi?
E kwesịrị ile ụlọ egwuregwu egwuregwu siri ike dị ka ala osisi egwuregwu ọdịnala, nke dị iche na ala egwuregwu mejupụtara. Osisi egwuregwu siri ike na-ezo aka na ala egwuregwu ebe a na-eji osisi eme ihe ngosi.
Sportslọ egwuregwu PVC bụ ụdị egwuregwu egwuregwu pụrụ iche nke emere maka ebe egwuregwu na-eji ihe eji eme chloride polyvinyl. Kpọmkwem, ọ na-eji polyvinyl chloride na copolymer resin dị ka isi akụrụngwa, na-agbakwunye fillers, plasticizers, stabilizers, agba na ndị ọzọ inyeaka ihe. , Na mpempe akwụkwọ na-aga n'ihu-dị ka mkpụrụ, ọ na-emepụta site na mkpuchi usoro ma ọ bụ site na kalenda, extrusion ma ọ bụ extrusion usoro. A na-ejikarị ihe dị iche iche eme ihe na-ekpuchi ya, n'ozuzu ya gụnyere akwa mkpuchi na-eguzogide (gụnyere ọgwụgwọ UV), akwa iko iko, ihe mkpuchi ụfụfụ na-agbanwe, akwa isi, wdg.
A na-eji ụlọ egwuregwu PVC eme ihe n'ọtụtụ ebe, asọmpi mba ụwa dị iche iche dị ka Egwuregwu Olympic ahọrọla ụlọ egwuregwu PVC. Enwere ike ịhụ na atụmanya ahịa nke ụdị PVC egwuregwu a na-efe efe sara mbara.
1. Tụnyere nke oru ngo na-eri: The na-eri nke n'ozuzu ọkachamara basketball siri ike osisi flooring na ọzụzụ siri ike osisi flooring karịrị 400 yuan kwa square mita, mgbe oru ngo na-eri nke ịkwanyere egwuregwu flooring ọkachamara na ndị na-abụghị ọkachamara venues bụ naanị 100-300 yuan kwa square mita. n'etiti.
2. Tụnyere nke na-ewu ọsọ: N'ozuzu, na-ewu nke a ọkọlọtọ basketball ikpe siri ike osisi n'ala na-ewe 15-20 ụbọchị, mgbe ndị na-ewu nke Wuxi ịkwanyere n'ala egwuregwu mama na-ewe 5-7 ụbọchị iji wuchaa.
3. Tụnyere nke mmezi chọrọ: osisi siri ike flooring na-adịghị mma nọgidere na-enwe, ọ dị mfe ịgbawa, deform, nla, ọkọ, keguru mmiri, na-apụghị tọgbọrọ n'èzí, na elu nke PVC plastic egwuregwu ubi n'ala nwere ikike kpochapụ mpụga mmetọ, dị ka elu mmetọ, na-eji a dị ọcha mop, Dị nnọọ sikrob na mmiri dị ọcha. Enwere ike iji nhicha na-anọpụ iche kpochaa isi unyi. A na-ejikwa astringency, waterproof, mildew, na antibacterial mee ụdị hexagonal nke otu pore mechiri pvc ala oyi akwa, nke mere na ngwaahịa ahụ n'onwe ya nwere mgbochi mgbochi onwe ya, si otú ahụ na-eme ka ọrụ nsị nke ngwaahịa ahụ dịkwuo elu.
4. Nkọwa nke agba agba: Osisi egwuregwu egwuregwu siri ike nwere otu agba, ebe ụlọ egwuregwu PVC nwere ọtụtụ agba, nke kwesịrị ekwesị maka nkwekọrịta na-enweghị usoro ma ọ bụghị nanị ala na ebe a na-egbochi ya.
Otu esi edozi nsogbu ọkọ nke PVC plastic
Mgbochi maka ime ụlọ egwuregwu PVC n'èzí